Ilhaan Cumar Oo Si Rasmi Ah Iskaga Furtay Ninkeedii, Kuna Dhaqaaqday Arrin Lama Filaan Ah (Sawirro) - Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Ilhaan Cumar Oo Si Rasmi Ah Iskaga Furtay Ninkeedii, Kuna Dhaqaaqday Arrin Lama Filaan Ah (Sawirro)
Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah, kana tirsan aqalka Kongreska Mareykanka, ayaa si rasmi ah iskaga furtay ninkeeda bil uun kadib markii ay diiwaan gelisay codsi ah in laga furo ninkeeda iyadoo sheegtay inaan dib loo hagaaji Karin guurkeeda.
Lamaanahan iminka boorsooyinka kala qaatay ayaa isu dhalay 3 caruur ah iyadoo go’aanka furriinka ah ay gaartay Ilhaan Cumar oo iminka xiriir la leh nin cadaan ah.
Ilahaan iyo ninkeeda ayaa lakala furay Talaadadii kadib markii maxkamadda waraaqaha furriinka ay saxiixeen shaqaalaha maxkamadda Hennepin County ee gobolka Minnesota.
Furriinka Ilhaan Cumar ayaa imaanaya bil kadib markii haweeney degan magaalada Washington, D.C., ay ku eedeysay Ilahaan Cumar inay xiriir la leedahay ninkeeda.
Markii Ilhaan Cumar la weydiiyay haddii ay kala tageen ninkeedii Axmed Xirsi ama la-haasaaweyso qof kale ayay sheegtay inaysan iminka jirin cid ay haasaawe ama xiriir la leedahay, iyadoo diiday inay ka hadasho nolosheeda shaqsiyeed.
Laba todobaad kahor ayay ahayd markii sawir qaade ka tirsan wargeyska Daily Mail uu sawirro kasoo qaaday Mynett oo ah ninka cadaanka ah ee ay iminka saaxiibka la tahay Ilahaan Cumar, oo u jiiftagaya ama seexanaya habeenno badan guriga Ilhaan Cumar.
Dailymail, ayaa sheegtay bishii Oktoobar in Ilhaan iyo Mynett uusan haasaawe kaliya ka dhexeynin balse ay si wadajir ah ugu noolyihiin guri qarsoodi ah oo ku yaala magaalada Washington iyagoo qorsheynaya inay fasax u aadaan Jameeyka isla markaana halkaas ay kusoo sameeyaan qorsheyaal ku saabsan mustaqbalkooda.
Ilhaan iyo Mynett, ayaa sidoo kale la sheegay inay qorsheynayaan inay isguursadaan marka lamaanayaashooda ay iska furan.